Medical Writings ဆေးပညာစာများ: ARV ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး
Mon, Aug 20, 2012 at 10:31 PM
ကျွန်တော် ယခု (့) မှာနေပြီး အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် ၂ဝ၁ဝ ဂျူလိုင်လလောက်က အလုပ်ရှင်ဟောင်း မွေးထားတဲ့ခွေး ကိုက်တာခံလိုက်ရတယ်။ ခွေးကတော့ အိမ်မွေးခွေးပါ။ အပြင်ကိုတောင် သိပ်ပြီး ထုတ်ကျောင်းလေ့ မရှိပါဘူး။ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးတွေတော့ ထိုးထားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အကိုက်ခံရပြီး ချင်းချင်းပဲ ကျွန်တော် (့) မှာ သွားပြီး ပြပါတယ်။ ဆေးလိမ်းပေးပြီး ဆေး ၁ လုံး ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးနာမည်ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ နောက်တော့မှ အသိဆရာဝန်ကို ပြောပြကြည့်တာ သူတို့ထိုးပေးတဲ့ဆေးက မေးခိုင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးလိုမျိုးဆေးတဲ့။ အဲဒီအလုပ်မှာ လုပ်နေတဲ့လူတွေလဲ အဲဒီခွေးရဲ့ကိုက်တာ အရင်က ခံရဘူးတယ်တဲ့၊ သူတို့လဲ ဒီလိုပဲဆေးထိုးတယ်တဲ့။ ကျွန်တော် သံသယ မရှင်းတော့ ၂ဝ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာ ရန်ကုန်ခဏာ ပြန်ရတုံး (အကိုက်ခံရပြီး ၅ လ၊ ၆ လ လောက်အကြာ) ရွှေဘုံသာလမ်းက အေးဆေးတိုက်က ဆရာဝန်မကြီးတယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး Anti Rabies ဆေး ၃ လုံးကို ထိုးဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ လုံးပဲ ထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၁ လုံးက (့) ကိုယူလာပြီး ရေခဲသေတ္တာ Freezer မှာ ထားမိလို့ ခဲသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုးတော့ ထိုးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးအညွန်းမှာတော့ ခဲသွားရင် ဆေးအာနိသင် မရှိတော့ဘူးလို့ ဖတ်လိုက်မိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ မေ့မေ့ လျှော့လျှော့ နေလာမိတာပဲ။ တခါတရံ ဝက်သား ဆိတ်သားဟင်းစားမိလို့ ခေါင်းနောက်ခြမ်းက ကိုက်တာက လွှဲရင်ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး ရောဂါ မခံစားရပါဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီလိုပေ့ါလျှော့မိတာပါ။ ကျွန်တော် သိချင်တာက -
၁။ အကယ်လို့ Anti Rabies က Dosage မပြည့်သလို ဖြစ်ခဲ့ရင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
၂။ အခုလို ၂ နှစ်လောက်ကြာပြီး အခြေအနေမှ ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကာကွယ်ပြီး ဘာကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးရမလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ Dosage မပြည့်ဘူးလို့ Guilty Complex ဝင်နေပါတယ်။
Rabies ဆိုတာ ကိုက်တာက ခွေးရူး၊ ကူးတာက (ဗိုင်းရပ်စ်) ဖြစ်တယ်။ ဒီပိုးတွေက ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ထဲ ဝင်လာပြီး ပျက်စီးစေတယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) တွေက ရောဂါရှိနေတဲ့ အကောင် (ခွေး၊ ကြောင်၊ မျောက်၊ မြေခွေး၊ လင်နို့၊ ခွေးတူဝက်တူ) ရဲ့ တံတွေးထဲမှာ ရှိနေတယ်။ သူတို့သွေးက ကိစ္စမရှိဘူး။ အကိုက်မခံရပေမဲ့ ပိုးပါနေတဲ့ တံတွေးက သွေးထဲ၊ ပါးစပ်ထဲ၊ နှာခေါင်းထဲ၊ မျက်စိထဲ ဝင်လာရင် ကူးနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်လာပြီး ဘယ်တော့ရောဂါရမလဲဆိုတာ ကူးစက်ရောဂါမှန်သမျှထဲမှာ အကွဲပြားဆုံးဘဲ။ ရက်ပိုင်းကနေ နှစ်နဲ့ချည်ကြာနိုင်တယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ ပေါ်ကာစမှာ တုပ်ကွေးနဲ့ ဆင်တယ်။ ဖျားမယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ မအီမသာဖြစ်မယ်။ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ယားယံမယ်။ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်လာမယ်။ စိတ်ရှုတ်ထွေးမယ်။ အမူအယာ မတူတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်။ သူများ မမြင်တာ မကြားတာတွေ မြင်ကြားလာတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာသူတိုင်း ခံစားရတာတွေ အတော်ကြီး ဆိုးဝါးတယ်။ နောက်ဆုံး အသက် ဆုံးကြရတယ်။ နှစ်တိုင်း တကမ္ဘာလုံး သေဆုံးသူပေါင်း ၅ သောင်းခွဲရှိတယ်။
1. အမျိုးအစား (၁) အကောင်နဲ့ ထိရုံ၊ အစာကြွေးမိရုံ၊ လျှာနဲ့ထိမိရုံ၊ = ဆေးကုစရာမလိုပါ။
2. အမျိုးအစား (၂) အဝတ်အစားဖုံးမထားတဲ့နေရာမှာ ကုပ်မိ၊ ခြစ်မိခံရရင်၊ အနာအဆာရှိတဲ့နေရာကို လျှာနဲ့ အယက်ခံရရင်၊ = ချက်ချင်း Immediate vaccination ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။
3. အမျိုးအစား (၃) အကိုက်ခံရ၊ ကုပ်ဆွဲခံရရင်၊ ဒဏ်ရာက သွေးထွက်ရင်၊ = Immediate washing and flushing of all bite wounds and scratches ချက်ချင်း အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ဆေးကြောသန့်ရှင်းပါ + Immediate vaccination ချက်ချင်းကာကွယ်ဆေးထိုးပါ + Rabies immune globulin (RIG) (ဂလိုဗြူလင်) ဆေးလဲထိုးပါ။
ကာကွယ်ဆေး မတူတာတွေ ရှိတယ်။ 1 ml ဒါမှမဟုတ် 0.5 ml ကို ၄-၅ ခါ အသားဆေးထိုးမယ်။ ၄ ပတ်ကြာမယ်။ တကယ်လို့ အရင်ကလဲ Cell-derived rabies vaccines (ဆဲလ်) ကနေဖေါ်စပ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို အပြည့် ထိုးဘူးထားသူဆိုရင် ဒီဆေးမျိုး ၃ ရက်ခြား၊ ၂ ခါသာ ထပ်ထိုးပါ။ Rabies immune globulin (RIG) (ဂလိုဗြူလင်) ဆေးထိုးဘို့လဲ မလိုပါ။
1. Tissue-culture or purified duck-embryo vaccines (တစ်ရှူး-ကာလ်ခြာ) သို့မဟုတ် ဘဲသန္ဓေကနေ ဖေါ်စပ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေး
• Intramuscular schedules အသားဆေးထိုးနည်း
2.5 IU ကို 0, 3, 7, 14 and 30 နေ့တွေမှာ စုစုပေါင်း (၅) ခါထိုးပါ။ လက်မောင်း နဲ့ ကလေးငယ်ရင် ပေါင်ရှေ့-ဘေးမှာ ထိုးပါ။ Buttock တင်ပါးမှာ မထိုးပါနဲ့။
• Abbreviated multisite schedule နေရာအများမှာထိုးနည်း
2-1-1 regimen ခေါ်တယ်။ ပဌမရက်မှာ Left arm ဘယ်ဘက်လက်မောင်းမှာ တချက်ထိုးပါ။ Right arm ညာဘက်လက်မောင်းမှာ တချက်ထိုးပါ။ ၇ ရက်နေရင် Deltoid muscle လက်မောင်းရင်းတဖက်မှာ တခါထပ်ထိုးပါ။ ၂၁ ရက်မှာ Deltoid muscle လက်မောင်းရင်းတဖက်မှာ တခါထပ်ထိုးပါ။
• Intra-dermal schedule အရေပြားထဲထိုးနည်းကို (RIG) မရနိုင်တဲ့အခါ အရေးပေါ်အဖြစ်နဲ့ထိုးတယ်။
- Human diploid cell vaccine (HDCV) (Rabivac TM) နဲ့ Purified chick embryo cell vaccine (PCECV) (Rabipur TM) တွေကို 0.1 ml စီ 8-site intradermal method (8-0-4-0-1-1) ထိုးတယ်။
- PVRV (Verorab TM, Imovax TM, Rabies vero TM, TRC Verorab TM) and PCECV (Rabipur TM) တွေကို 0.1 ml စီ 2-site intradermal method (2-2-2-0-1-1) ထိုးတယ်။
2. Combined immunoglobulin-vaccine 20 IU/kg တခါတည်းထိုးတယ်။ Anaphylactic shock reactions (ရှော့ခ်) ဖြစ်လာမှာကို သတိထားပြီး၊ ကုသဘို့ အဆင်သင့်ထားရမယ်။
3. Rabies immunoglobulin (RIG) ကို အကိုက်ခံရတဲ့နေရာတဝှိုက်မှာ ထိုးမယ်။ ကျန်တာကို အသားဆေး ပေါင်မှာထိုးမယ်။
4. ဆေးဘိုး သက်သာအောင် Cell-derived vaccines ကိုဘဲ Intra-dermal rabies vaccination ထိုးနည်းလဲ ရှိတယ်။ Purified Vero cell vaccine ဆေးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ၇ သောင်း ထိုးထားပြီးတာ နှစ်တွေ များနေပြီ။ သီရိလင်္ကာ (၁၉၉၅) နဲ့ ဖိလစ်ပိုင် (၁၉၉၇) မှာလဲ သုံးတယ်။
5. Brain-tissue vaccines ဦးနှောက်ကနေဖေါ်စပ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေး အခုမသုံးတော့ဘူး။
• ARV မျောက်ကိုက်၍ ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထိုးရခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/05/arv.html ကိုလဲ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Wed, Aug 22, 2012 at 11:15 PM
၁။ ဆရာပြောပြခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေက ရန်ကုန်မှာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနိုင်လား။ အခုလို ၂ နှစ်ကျော်ကြာပြီးမှ ထိုးရင်ကော ဆေးမှီပါ့အုံးမလား။ ၂။ အကိုက်ခံရတဲ့ နေရာက ဘယ်ဖက်ခြေဖဝါးမှာပါ၊ သွေးလဲတော်တော်များများထွက်ပါတယ်။ ခွေးစွယ်လဲ ခြေဖဝါးထဲကို စိုက်ဝင်သွားပါတယ်။ အသားလဲ ပဲ့ပါသွားပါတယ်။ ဆရာရှင်းပြထားတဲ့ နံပါတ် ၃ အမျိုးအစားနဲ့တူပါတယ်။ အမျိုးအစား (၃) အကိုက်ခံရ၊ ကုပ်ဆွဲခံရရင်၊ ဒဏ်ရာက သွေးထွက်ရင်၊ = Immediate washing and flushing of all bite wounds and scratches ချက်ချင်း အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ဆေးကြောသန့်ရှင်းပါ + Immediate vaccination ချက်ချင်းကာကွယ်ဆေးထိုးပါ + Rabies immune globulin (RIG) (ဂလိုဗြူလင်) ဆေးလဲထိုးပါ။ Immediate Vaccination ဆိုတာ ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကိုပဲ ဆိုလိုတာလား။ အကိုက်ခံရပြီး ချက်ချင်းကတော့ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးလိုမျိုးကိုပဲ ထိုးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆေးကရော ကောင်းကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိရဲ့လား။ ခွေးက အကိုက်ခံရပြီး ၃ လ ၄ လလောက်အထိ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ သူ့သခင် ဟောက်ရင်ငြိမ်နေတာပဲ။ အသိစိတ်ရှိတဲ့သဘောကို ပြောချင်တာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးရသလဲ ကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်တော်တို့ရှိတုံးက ၁၄ ရက်တိတိ၊ ချက်မှာထိုးရတာသာ ရှိတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာ နောက်ကျမယ်လို့ မထင်ပါ။ ရန်ကုန်မှာ ဒီရောဂါကိုအထူးပြုကုသတဲ့ ဆေးရုံ။ ဆရာဝန်ရှိမှာပါ။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရင် ဆရာပြောတာထက်ပို ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးကတော့ ခွေးရူးနဲ့ မဆိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုက်တဲ့ခွေးဟာ ခွေးရုးဖြစ်နေရင် ကိုက်ပြီးတဲ့နောက် ၇ ရက်၊ အများဆုံး ၁ဝ ရက်နေရင် သူများသတ်တာ မဟုတ်ဘဲ ရောဂါရပြီး သေသွားမယ်။ အဲဒါကို စုံစမ်းရင် စိတ်အေးရမယ်။ ခွေးလေခွေးလွင့် မဟုတ်လို့ သိနိုင်မယ် ထင်တယ်။ အခုထိ အသက်ရှင်နေရင် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 2:54 AM